Cancer – Healthy Life Journal
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကင်ဆာရှိကြောင်း သိလိုက်ရချိန်မှာ စိတ်ဖိစီးမှု၊ ဝမ်းနည်းမှု၊ အားငယ်မှု၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ တုန်လှုပ်မှု စတဲ့ ခံစားချက်တွေ ရောပြွမ်းပြီး ခံစားရတာကြောင့် ရှေ ့ဆက်ပြီး ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို တွေးတောရခက်နေနိုင်ပါတယ်။ ကတုန်ကယင်ဖြစ်ပြီး မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ခံစားရပေမယ့်...
ကိုလက်စထရောများခြင်းနှင့် ကင်ဆာဖြစ်ခြင်း ကာကွယ်နိုင်ရန်
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. အသက် ၄၀ ထဲ ဝင်လာချိန်မှာ သူငယ်ချင်းအများစုက ကိုလက်စထရောတွေ များနေကြပါတယ်။ အဲဒီလိုမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုစားသောက်နေထိုင်သင့်ပါသလဲ။ A. အခုမြန်မာပြည်မှာ ကိုလက်စထရောများတာနဲ့ ကင်ဆာတွေ အရမ်းအဖြစ်များပါတယ်။ ကျန်းမာရေးက ဘဝမှာ...
———၊ ဇွန် ၊——— ကင်ဆာရောဂါ ခံစားနေရပြီဆိုရင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေစဉ်အတွင်း အစားအသောက်တွေကို အာဟာရပြည့်ပြည့်ဝ၀ရရှိအောင် စားသောက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလို အာဟာရအပြည့်ရရှိအောင် မှီဝဲတာကြောင့် ဆေးကုသမှုကို အောင်မြင်အောင် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကူးစက်ပိုးတွေမဝင်အောင် တွန်းလှန်နိုင်စွမ်းရှိစေပါတယ်။ အာဟာရချို ့တဲ့မှုရဲ့ ဆိုးကျိုးရရှိမှုကို...
တူညီသော အကြောင်းရင်းခံ ကင်ဆာများနှင့် အိမ်ထောင်ဦးစီးတို့၏ အခန်းကဏ္ဍ
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု သမားတော်ကြီး) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ ရွှေရောင်နှင်းဆီ ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ကင်ဆာအများစုမှာ တူညီတဲ့ အခြေခံအကြောင်းရင်းတွေ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒါတွေက ဘာတွေပါလဲ ဆရာ။ A. ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားရတဲ့ အဓိက အခြေခံအကြောင်းရင်း...
———၊ ကိုထက် ၊——— ကွမ်ဇူးမှ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် ဇိုဂျန်အမည်ရှိ မိန်းကလေးဟာ တစ်လကျော်ကြာ အဆက်မပြတ် ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှုဝေဒနာကို ခံစားနေခဲ့ရတယ်လို့ ဖူဂျင်းသတင်းအရ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းစင်တာကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ “အစာအိမ်မှန်ပြောင်းကြည့် စစ်ဆေးမှုကို...
ရွှေရောင်နှင်းဆီ ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကင်ဆာလူနာများကို အဝေးရောက် Viber ဗီဒီယိုဖြင့် အခမဲ့ဆွေးနွေးပေးနေ
———-၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊————- ရွှေရောင်နှင်းဆီ ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကင်ဆာလူနာများအကျိုးအတွက် Viberဗီဒီယိုဖြင့် အခမဲ့ ဆွေးနွေးနိုင်သည့် အစီအစဉ်ကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း ရွှေရောင်နှင်းဆီ ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်း၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင်က ပြောသည်။ “တစ်ပတ်မှာတစ်ရက် Viber ဗီဒီယိုနဲ့ ဆွေးနွေးပေးတာပါ။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း...
ရွှေရောင်နှင်းဆီ ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်း အခမဲ့ ကင်ဆာဆေးသွင်းဝန်ဆောင်မှုကို ပန်းလှိုင်စီလုံဆေးရုံတွင် ဆောင်ရွက်ပေးနေ
———-၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊———— ရွှေရောင်နှင်းဆီ ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်း အခမဲ့ ကင်ဆာဆေးသွင်းဝန်ဆောင်မှုကို ပန်းလှိုင်စီလုံဆေးရုံတွင် အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့နှင့် သောကြာနေ့ နေ့လယ် ၂-၄ နာရီအချိန်၌ ပြင်ပလူနာကြည့်ရှု၍ ဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း ရွှေရောင်နှင်းဆီ ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်း၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင်က ပြောသည်။...
၂၀ဝ၈ က စခဲ့သည့် အစာလမ်း တွယ်ဆက်တစ်သျှူးကင်ဆာကို လေးကြိမ်တိုင်တိုင် ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့သူ ဒေါ်ခင်သန္တာလင်း
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ယခုအခါ အသက် (၅၉) နှစ်အရွယ် ဒေါ်ခင်သန္တာလင်းသည် ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လကစပြီး အစာလမ်းတွယ်ဆက် တစ်သျှူးကင်ဆာ ဝေဒနာ လက္ခဏာများကို စတင်ခံစားခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။ “စစချင်း ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေ စဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ အန်တီဝမ်းသွားရင်...
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ National Cancer Center မှ Can Help News စာစောင်ပါ “CANCER AS A TEACHER” ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုပြီးနောက် ကင်ဆာဝေဒနာရှင်တွေ၊ ၎င်းတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့...